Uhlolojikelele lwe-Supply Chain - Pandawill Technology Co., Ltd
Uhlolojikelele lwe-Supply Chain
Phakathi kwemikhiqizo esiyikhiqizayo, inani elingange-80% lomkhiqizo lingakhiqizwa yi-BOM (Bill of Material). Sihlela konke ukuthengiselana ngokuya ngezidingo nezinqubomgomo zamakhasimende ethu, sicabangela izinto ezinjengezinga elidingekayo lokuguquguquka nokusebenza kahle kwempahla. IPandawill isebenzisa ithimba elizinikele, elenza izingxenye ezithile kanye nokuthengwa kwempahla ukuphatha ukuphathwa nokuthengwa kwezinto ezisetshenziswayo kusetshenziswa uhlelo lokulawulwa kwekhwalithi olulawulwa futhi oluhlolwa isikhathi oluqinisekisa ukutholwa kwezingxenye ze-elektroniki ezingenaphutha.
Lapho uthola i-BOM kumakhasimende ethu, okokuqala onjiniyela bethu abanolwazi bazohlola i-BOM:
>Uma i-BOM icace ngokwanele ukuthola isilinganiso (inombolo yenxenye, incazelo, inani, ukubekezelelana njll)
>Nikeza iziphakamiso ngokususelwa ekusebenziseni izindleko, isikhathi sokuhola.
Sifuna ukwakha ubudlelwano besikhathi eside, bokusebenzisana nabalingani bethu esibavumile emhlabeni wonke okusivumela ukuthi sinciphise ngokuqhubekayo izindleko eziphelele zokuthengwa kanye nokuxakaniseka kokuthengwa kwezinto ngenkathi sigcina amazinga aphezulu ekhwalithi kanye nokulethwa.
Kwaqashwa uhlelo olunzulu noluphelele lokuphathwa kobudlelwano babahlinzeki (i-SRM) nezinhlelo ze-ERP ukulandela inqubo yokuthola ulwazi. Ngaphezu kokukhethwa nokuqapha okuqinile kwabaphakeli, kube nokutshalwa kwemali okukhulu kubantu, kwimishini nasekuthuthukisweni kwenqubo ukuqinisekisa ukuthi ikhwalithi. Sinokuhlolwa okuqinile okungenayo, kufaka phakathi i-X-ray, ama-microscopes, iziqhathanisi zikagesi.